ဗိသုကာနှင့်အင်ဂျင်နီယာများကကျွန်ုပ်တို့သည် Sapanca Teleferic Project ကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 Sakaryade ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ, Sapanca cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင်ကဆိုပါတယ်
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, TELPHER 0
ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ, Sapanca cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင်ကဆိုပါတယ်
Sapanca ကုမ္ပဏီအတွက်ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုယူဆထားတဲ့အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဗိသုကာဆက်နွယ်, Sakarya အတွက်အခန်းပေါင်းကိုယ်စားလှယ်များကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အစည်းအဝေးကျင်းပ
ယခင်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် Sapanca မြူနီစီပယ်နူးညံ့သောကာလရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကေဘယ်လ်ကားစီမံကိန်းကိုKırkpınarတစ်ဦးအနေဖြင့်အများပြည်သူအစီအစဉ်အပေါ်။ Bursa ကနေကေဘယ်လ်ကားများ၏အနိုင်ရလေလံ AS ၏အလုပ်စတင်လူများတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူနှုတ်ဆက်သည်။
Demirgövအတွက် Turgay ကိုယ်စားမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ Sakarya ဌာနခွဲကသမ္မတဟိုစနီမူဘာရက်Gürpınar, Sakarya ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် Sami အဘိဓါန် Amigos, လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများစက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ Sakarya ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ် Salim Aydınကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း မူတည်. TMMOB အဆိုပါ (တူရကီအင်ဂျင်နီယာများကုန်သည်များသမဂ္ဂနှင့်ဗိသုကာ), ဘူမိရူပအင်ဂျင်နီယာများ Serhan ကိုယ်စား ROOM တွင် အဆိုပါMandacı; Özgümüş Burhan Bursa အဖြစ်ကနေ cable ကိုကားတစ်စီးနှင့်အတူအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်မှာကျင်းပတဲ့ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးကိုအတွက်ကုမ္ပဏီအဖြစ်ကုန်သည်ကြီးများစက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုမ္ပဏီ၏တောင်းဆိုချက်အရပြီးနောက်Özgümüş Burhan အခွင့်အာဏာမိန့်မြွက်တော်မူ၏။
ဒါကြောင့်ဝေးသည့်ဝယ်ယူမှဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အသေးစိတျဖော်ပြတိကျတဲ့ကြောင့် Sapanca မြူနီစီပယ်ကတိအတွက်ငွေပေးချေမှု၏ 80% ထွက်သယ်ဆောင်ဟုပြောသည်။
သူတို့နေရာမှမပါဘဲပေးပို့စံချိန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါနဲ့, ဒါပေမယ့်အလုပ်Özgümüşဖော်ပြစတင်နိုင်ဘူး; အသစ်ကမြို့တော်ဝန်၏ထိုင်ခုံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည့်မြူနီစီပယ်ခြင်းဖြင့်သွားတာတဲ့ကိစ္စအဖြစ်အခါအသနားခံလွှာကဆိုသည်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာများကိုယ်စားလှယ် Salim Aydin ပြည်နယ်၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်း, အ Sapanca Kartepe အကြားလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပြသခဲ့သည်၏နံပါတ်မည်မျှလေလံမေးတယ်။
ကုမ္ပဏီအရာရှိများ, ဤမေးခွန်းကို; ဤအတောအတွင်း2နှင့်ကုမ္ပဏီများ၏နံပါတ်နုကိုယ်ရေးရာဇဝင်တာကြောင့်4လကာလ, ကုမ္ပဏီများ၏နံပါတ်နု 1 ဝင်ရောက်နေချိန်တွင်, ဒါကြောင့်ငါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းဟုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့်ကြေညာချက်ထဲမှာစက်မှုအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းအစည်းအဝေး၏ဆက်လက် ပတ်သက်. အောက်ပါအချက်အလက်များကိုပေးထားခဲ့သည်:
"ဒီပရောဂျက်ကိုတည်နေရာမှားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့ technique ကိုအဖြစ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဆန္ဒရှိလျှင်, လူထုများ၏ဂေဟစနစ်ဟန်ချက်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းအခြားရွေးချယ်စရာဆိုဒ်များကြေညာခဲ့ကြနှင့်အတူသစ်ကိုစီမံကိန်းများတွင်မြို့သူမြို့သားအကျိုးရှိမည်ကိုသူတို့အပြည့်အဝထောက်ခံမှုပေးလိမ့်မည်။ တူရကီအင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဗိသုကာပညာရှင်များကုန်သည်များပြည်ထောင်စု Sakarya အစိတ်အပိုင်းများအတွက်သူတို့လက်ရှိစီမံကိန်းကိုဆန့်ကျင်နေကြသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကဒီစီမံကိနျး၏သဘောပေါက်ဘို့လိုအပ်သမျှကိုပြုလိမ့်မည်နှင့်ဤပြဿနာအပေါ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောမဟုတ်ကြောင်း၏ Kirkpinar လူတွေ; အခြေအနေကဒီအချက်မှာတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန်ထရိုက်တာမှအကြောင်းကြား၎င်းတို့၏အစည်းအဝေးများများအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခဲ့ကြသည်။ "(Sakarya Yenihab)
ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ Group သည် Kadikoy-Kartal မက်ထရိုသို့ပြောကြားခဲ့သည်! 19 / 08 / 2012 ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံတွင်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအသက်အကြီးဆုံးမက်ထရိုရထားလမ်းစနစ်များရာ၌ခန့်ထားပြီဖြစ်သော်လည်းကံမကောင်းကယခုနှစ်တစ်နှစ် xnumx'l xnumx'l အထိအချိန်ကြာမြင့်စွာလျစ်လျူရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစ္စတန်ဘူလ်သေးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ပေါင်းစည်းမှုအတွက်လုံလောက်စွာနှင့်ချို့တဲ့ဖြစ်သည်ကမ္ဘာ့အဆင့်မြင့်လိုမြို့ကြီးပြမှုစနစ်အတွက်ရထားလမ်းဖွင့်မှာတော့မြို့တော်တစ်မြို့အမြဲ, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ကင်းမဲ့, နောက်ဆုံး 1940 နှစ်ပေါင်း .. ခံစားခဲ့ရအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အထူးသဖြင့်မြေအောက်ရထားနှင့်အလင်းရထားလမ်းစီမံကိန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအရှိန်ရခဲ့သည် ရထားလမ်းစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးönemsenmişပေမယ်လေ့လာမှုများကျနော်တို့ကြီးထွားစွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားလျှင်မလုံလောက်ဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မရှိမဖြစ်၏ရထားလမ်းနှင့်မြေအောက်ရထားစနစ်များကိုတတ်နိုင်, လုံခြုံ, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဖေဖော်ဝါရီလ 11 1888 Sirkeci ဘူတာရုံအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ Ogust Yasmund Prussian ဗိသုကာပညာရှင် ... 11 / 02 / 2015 11 1878 ရက်စွဲပါဖေဖော်ဝါရီလ Rumeli ရထားလမ်းနှင့်အတူသမိုင်းအတွက်ယနေ့သြစတြီးယားကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ယူဆခဲ့သည် pass ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့နာမညျကိုစစ်ဆင်ရေးအရှေ့မီးရထားကုမ္ပဏီဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 11 1888 Sirkeci ဘူတာရုံအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆောက်အဦ Prussian ဗိသုကာပညာရှင် Ogust Yasmund ကဒီဇိုင်းခဲ့သည်နိုဝင်ဘာလ31890 အတွက်ဝန်ဆောင်မှုဝင်ကြ၏။
သူ 500 Mimar Sinan ဗလီအဆိုပါ Marmaray တစ်နှစ်နှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့တာကိုအခြေခံပြီး 110 နှစ်ပေါင်းခိုင်မြဲချင်ခဲ့တယ် 06 / 06 / 2013 ဒီ - နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဦးပိုင်ဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Ahmet Eren ကိုမေးမြန်း Al-Aman Khan က Bitlis အလုပ်ရှင်များပြည်ထောင်စုအစည်းအဝေးတွင်ဘိလပ်မြေအခြေစိုက်တစ်နှစ် 500 အဆိုပါ Mimar Sinan ဗလီ Marmaray 1102လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တနှစ်တွင် Tayyip အာဒိုဂန်, ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်ဘိလပ်မြေစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များမေးမြန်းရာတွင် အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတည်းခိုခန်း? - အဲဒီမှာ 500 တစ်နှစ်သမိုင်း။ - ထိုအချိန်တွင်ပင်ကတစ်နှစ် 500 ရှင်သန်ကြောင်းအဆောက်အဦများမိတ်ဆက်သည်။ သငျသညျ 70-80 နှစ်ပေါင်းအခြေစိုက်ဘိလပ်မြေ၏အကြောင်းရင်းများထက်ကျော်လွန်မသွားသလဲ? Ahmet Eren, ဝန်ကြီးချုပ်အကြားကဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတူရကီ, အစည်းအဝေးအတွင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌTÇMBထုတ်လုပ်သူများအသင်း (TCMA) ကသမ္မတ Automotive နှင့် Oyak ဘိလပ်မြေ Group မှ Cement ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
Mimar Sinan တံတား '' အဘယျသို့တိကျစွာပန်းချီ 30 / 04 / 2014 Mimar Sinan တံတား '' နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဘယ်အရာကို color: သစ်သောကြာနေ့ဗလီ Mimar Sinan တံတားများ၏ရှေ့မှောက်၌အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် D-100 ကုမ္ပဏီကြီးလူကူးတံတား, ခြယ်။ အဆိုပါဆေးဆိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်6လခနျ့ကိုအဆုံးသတ်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ သန့်စင်ခြင်း, အဝေးပြေးလမ်းမကြီး D-1003ကုမ္ပဏီကြီးစုစုပေါင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောမြို့တော်မြူနီစီပယ်, ခြယ်4months ago အကြောင်းကိုဖန်ဆင်းလူကူးတံတားများ Mimar Sinan တံတားပန်းချီ၏တလပြည့်နေ့ဓာတုဗေဒများအတွက်တင်ဒါအနိုင်ရခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီများ, တံတားပန်းချီဖြစ်စဉ်ကိုနွေရာသီ၏အစနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။76 အထူးရိန်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များဆေးဆိုးလုပ်ငန်းစဉ်သည်လအတွင်းပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်တို့ကိုလည်းလုပ်လေ၏။ ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများရာသီဥတုရဲ့ကောင်းသောဤအချိန်လျှင်သွားရ ... ပိုပြီး
Mimar Sinan တံတားတစ်ဦး၏စက်လှေကားပေါ်လမ်းလျှောက်နိုင် 03 / 06 / 2014 Mimar Sinan တံတားတစ်ရက်ကျော်လူကူးတံတားဖြတ်ကူး D-100 Izmit အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတစ်ဦးသည်အလွန်သိပ်သည်းသောလူ့အသွားအလာလည်းမရှိနီးပါးအခါတိုင်းအတွက်စက်လှေကားလမ်းလျှောက်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Mimar Sinan တံတားများ၏ဗလီများ၏ရှေ့မှောက်၌အထူးသဖြင့် Yenicuma စက်လှေကားမကြာခဏမသန်စွမ်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ လမ်းလျှောက်သည့်အခါဒါဟာလူကူးတံတားလည်းကျကွီးရှယျအိုမြားအဘို့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကြိတ် pass တွေဟာအထူးသဖြင့်အနေ stairs ။ ကျရှုံးခြင်း၏အမှု၌မြန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုဖြစ်လိုအပ်ချက်များကိုအလုပ်လုပ်သောစက်လှေကားအလုပ်လုပ်ပိုပြီးမကြာခဏ check လုပ်ထားခံရဖို့။
ဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများ Group သည် Kadikoy-Kartal မက်ထရိုသို့ပြောကြားခဲ့သည်!
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဖေဖော်ဝါရီလ 11 1888 Sirkeci ဘူတာရုံအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ Ogust Yasmund Prussian ဗိသုကာပညာရှင် ...
သူ 500 Mimar Sinan ဗလီအဆိုပါ Marmaray တစ်နှစ်နှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့တာကိုအခြေခံပြီး 110 နှစ်ပေါင်းခိုင်မြဲချင်ခဲ့တယ်
Mimar Sinan တံတားတစ်ဦး၏စက်လှေကားပေါ်လမ်းလျှောက်နိုင်
Mimar Sinan လမ်းသွားလမ်းလာတံတားမှာတိုးတက်မှုအတွက်ဓာတ်လှေကားအလုပ်